﻿ के तपाई हाई हिल लगाउनु हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यसका असरः
के तपाई हाई हिल लगाउनु हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् यसका असरः
धेरै जसो महिलाले जुत्ताका रुपमा हाई हिल रुचाउने गर्छन् । महिलाका बीच हाई हिल लगाउने ट्रेन्ड नै भइसकेको छ । हाई हिलमा हिड्दा स्मार्ट देखिन्छ भन्ने आम महिलाहरु एक किसिमको धारणा छ । युवतीहरुले मात्र नभएर साना बालीकाहरुले पनि हाई हिल मनपराउछन् । तर, हाई हिलले स्वास्थ्यमा पार्ने असर कमैलाई मात्र थाहा होला ।
हाईले पारेको असर आफुलाई महसुस नहुन सक्छ । जब शरीरको सन्तुलन र चाल बिग्रन थाल्छ अनिमात्र हाई हिलको प्रभाव थाहा हुन्छ । सुरुको अवस्थामा हिलले खुट्टा मात्र सुनिने लक्षण देखाउछ । तर लगातार हाई हिल लगाएमा केही बर्षपछि खुट्टा दुख्ने, नशामा समस्या, कम्मर दुख्ने जस्ता समस्या आउँछ । यसले युवतीको खुट्टाको अगाडिको भाग चौडा भई खुट्टाको स्वरूप नै बिगार्छ ।
हामीले हाई हिलका कारण दुर्घटनामा परेर सयौं युवती अस्पतालसमेत जानु परेको खबर समेत सुनि रहेका छौ । लामो समयसम्म हिल जुत्ता प्रयोग गर्ने एक तिहाई महिलामा खुट्टाको औंला सुन्निने (हेमरटोज) देखि टाङको नसामा स्थायी समस्या पनि आउन सक्ने हाई हिलमा गरिएको एक अनुसन्धानले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका अनुसार हाई हिल लगाउँदा शरीरको कम्मरभन्दा तलको भाग अगाडि झुकेको हुन्छ जसलाई सन्तुलनमा ल्याउन मेरुदण्डको अवस्था परिवर्तन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यसले कम्मरको नशामा दबाब जसबाट साइटिका नामको रोग लाग्ने संभावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी, बालिकाहरुले बच्चा अबस्थामा लगाएको हाई हिलले युवा अवस्थामा कुर्कुच्चा र मेरुदण्डमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ ।